Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ပထမရတဲ့နှစ်သိမ့်ဆု
Writer Sein Lyan Time 11:11 pm
သွားပြီ .. ပထမဦးသူ မွှေးမွှေးပေးမယ်ဆိုလို့ .. ခုတော့ အိုင်ခီလောက်ကြီး ဦးသွားပီ .. အဟင့်ရွှတ် :D
အဟား..မျက်စောင်းလေးထိုးလိုက်၊ ခြေလေးဆောင့်လိုက်နဲ့ ကဗျာရွတ်နေတဲ့ မောင်ဖိုးစိန်ရုပ်ကို ပုံဖော်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ရှက်ရမ်းတယ်ထင့်ပါ့အကိုယောက်ဖတော့
အမ် ပြောနေတာနဲ့ ဆိုလိုတာပျောက်သွားပြီ အဟီး
ကဗျာလေး ကို ကြိုက်တယ် အကိုရ
ဆိုလိုရင်းလေးကို ထိထိမိမိ စပ်ထားတာလို့ ခံစားမိတယ်
ငယ်ဘဝ အကြောင်းကို ဟာသနှောပြီး
ညီယောက်ဖလေး မူးနေလို့ တွေးမိတာ
အတင်းကို ကားပြာထဲပို့ ပေးမလို့ ပါ
တံခါးကိုသော့ခတ်လို့ ဘော်ဒီဂတ်တွေနဲ့ လေ
နဂိုက မြှောက်ရင် တက်အောင် ကတဲ့သူ .. ဆိုတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ .. ဒါပေမယ့် နဲနဲ မရှင်းမရှင်း ဖြစ်နေတယ် .. ဘာတက်အောင် ကတာတုန်း ကိုဖိုးစိန် .. မရှင်းမရှင်း လုပ်နဲ့ဂျာ . ရှင်းအောင်လုပ် .. အဟီး .. :D ခေါင်းပေါင်းနဲ့တော့ ပေါက်လိုက်နဲ့နော် .. သားသားကြောက်ကြောက် ... :D
မျက်စောင်း ဘယ်လိုထိုးလဲ အားရင်သင် ပေးအုံးနော်
ဟီး... ပထမ နှစ်သိမ့်ဆု... ယူတဲ့ပုံလေးမြင်ဘူးချင်လိုက်တာ... မျက်စောင်းလေးထိုးထိုးပြီး ကဗျာရွတ်နေတဲ့ပုံ လေး..မြင်ကြည့် ပြီး...ရယ်သွားတယ်... ဟဲဟဲ :-P
မှန်တရ် ငါ့အစ်ကိုရေ ။ ဘာတက်အောင် ကတာတုန်း ။ နောက်ပြီး နွေးနွေးသဲမွန်နဲ့မငုံပြောသလိုပဲ မျက်စောင်းထိုး ခြေလေးစောင့် နှပ်လေးတွဲလောင်းနဲ့ ကဗျာကို စောင့်ကြီးအောင့်ကြီးရွတ်နေတဲ့ ခေါင်းပေါင်းရွဲ့ စောင်း ပုဆိုးတွဲလောင်းလေးကို မြင်ယောင်သွားကြောင်း ။ တစ်လက်စတည်း ကိုခွန်ဖကို မဖတ်ပဲ အရင်မန့်လို့ တင်းသွားကြောင်း ။ အစ်ကို့ကိုလည်း ညီအိပ်နေမှ လှမ်းပြောလို့ တင်းနေကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ် ။
တော်သေးတယ် ၂တန်းကျောင်းသားဆိုတော့ .. :P
ငယ်ဘဝနော်.. ပျော်စရာတွေ.. အလွဲတွေနဲ့..
နှစ်သိမ့်ဆု ဆိုတာလည်း ဆုတော့ ဆုပါပဲ..
စိတ်ဓါတ်မကျနဲ့ အခု ဘာပဲလုပ်လုပ် ပထမ ရအောင် ပြန်လုပ်..း)
ပြည်ထောင်စုအလံလေးကိုင် ခေါင်းပေါင်းချောင်နဲ့ ပုဆိုးကျွတ် နှပ်ချေးတွဲလောင်း ဟောင်းလောင်း( HOW LONG) မောင်ဖိုးစိန်လေးရေ ...
ဒီခေတ်မှာ သာ ဆိုရင် ပထမ ချုပ်မှူးကြီးဆု ပြေးမလွတ်ဘူးဟေ့ ....
ဟဟား ကိုဖိုးစိန်ကြီး တော်တော်ရယ်ရတယ် အော်..အဲ့တုန်းကတော့ ခလေးကိုဘယ်သိမလဲနော် သားစိန်လေးက တော်တော်စိတ်ကြိးတာပဲ ရှက်လည်းရှက်ဘူး ပုဆိူးကျွတ်တယ်တဲ့း) ဒါနဲ့ မြှောက်ပေးရင် ဘာတက်အောင်ကတာတုန်း စကားပုံမမှန်ဘူး မောင်မင်းကို မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးမပေးနိုင်ပါ လူကြီးသားမို့ အောင်မှတ် 40 တော့ပေးလိုက်မယ် ။
ဟီးဟီး ရီလိုက်ရတာ .. ခိုးဖတ်နေပါတယ်ဆိုမှ
ဒါကြောင့် ကိုဖိုးစိန်တို့က ပထမမှ ပထမ ဖြစ်နေတာကိုး
ငယ်ငယ်တည်းက အကျင့်ကိုး .. :D:D
၈ တန်း ။ ၉ တန်းမှဆိုရင်တော့..................
စင်ပေါ်မှာ ဗရုတ်သုတ်ခ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံလေးကို မျက်စိထဲ မြင်ယောင်မိတယ်.... ဟိဟိ...:P
ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတာ လက်စပ်သပ်တော့ ပထမဆု မရတဲ့ အကြောင်းတွေးပြီး တိုင်နဲ့ ခေါင်းနဲ့ စောင့်နေလို့ ဖြစ်မယ်။
မအယ်က တစ်ကယ် ပထမရပြီး လူကြီးသမီးကို ပေးရမှာမို့ သမီးက တတိာ ဆုပဲယူတဲ့။
မအယ် ဆု တက်မယူလို့ ကျောင်းအုပ်တွေရော ဆရာဆရာမတွေရော အိမ်လာပြီး အတင်းခေါ်ကြတယ်။
ဆုလည်းယူပြီးေ၇ာ တစ်ကယ်ရတာ ငါပါ ဆရာတွေက ဘယ်သူ့ သမီးကို လူကြီး သမီးဆိုပြီးပေးလိုက်တာပါဆိုပြီး မြို့ ပတ် အော်ပေးလိုက်တယ်။
ရီရတယ်။ သူနဲ့ တက္ကသိုလ်ရောက်တော့ တစ်ကျောင်းထဲ ပြန်ဆုံသေးတယ်။
မအယ်က ဖိုးစိန်လိုတော့ ပုဆိုးကျွတ်မကျဘူး
ကိုဖိုးစိန်ရေ ရယ်ရတယ် အဟတ်ဟတ်
ခေါင်းပေါင်းကလည်း လေတိုက်လို့ လွင့်
ငိုတော့ နှာရည်တွေယိုလို့ 
(ဒီလိုနဲ့ ပဲ ပထမရတဲ့ နှစ်သိမ့်ဆုကို ရသွားတာပေါ့)
မာန်တင်းပြီး ကဗျာရွတ်နေပုံကိုလည်း သဘောတော်ကျသွားပါကြောင်း။
အော်င့ါမောင်လေးရယ် .... မျက်စီထဲ မြင်ရောင်မိပါရဲ့။ အဲ ပြောအုံး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြှောက်ရင် ဘာတက်အောင်ကတာလဲ။ အမကိုတော့ စကပ်လေးနဲ့လှတယ်တဲ့။ ဟီး သူကြတော့ ပုစိုးကျွတ်တယ်။ ဟီးဟီး
I wanna see this cute photo of you.
Your writing style is so nice.
ပထမ မရလို့ 
နှစ်တန်းနှစ်ဆိုတော့ အတွင်းခံ ဘယ်ဝတ်အုံးမလဲနော့။
ဟီးဟီး ဘယ်လို ပုံဖြစ်နေမယ် ဆိုတာတွေးမိပါရဲ့။
တခုခုပဲ ဘာလဲမသိလို့ ပြောပြပေးပါနော်။
အဲ့ဒါရှင်း အဲ့ဒါရှင်းမှ ရီနိုမာန် ဆိုတာဘာလဲ လို့ ပြန်ရှင်းပြမယ်။
ဖေါ်ကောင်ဘညွန်မဟုတ်တော့ ဘူး ဖိုးစိန်ကွ ဖိုးစိန် ပထမနှစ်သိမ့် ဆုကြီးမြဲမြဲကိုင်ထား မန့် နေရင်းရီရလွန်း လို့ နောက်မှထပ်မန့် မယ်
မြင်ယောင်မိပါရဲ့ မောင်ဖိုးစိန်ရယ်... ဟာဟ.. ပုဆိုးကျွတ်နဲ့ ခေါင်းပေါင်းလိုက်ကောက်နေတဲ့ပုံ...ဖြစ်တတ်ပါဘိ... အဲဒါလေက ဖျက်လို့နော့....
ရယ်ရတာ မောတောင် မောတယ်..။
ရယ်လိုက်ရတာ... :) :D :P ;D ;)
အဟား ဟား ပထမ နှစ်သိမ့်ဆုတဲ့ အဟီးးးးးး တော်တာပေါ့.. ကျနော်ဆို ဘာမှ ရဘူး
အကိုရေ ညီကနည်းနည်း အ လို့ မရှင်းတာလေးမေးချင် တယ်..ရမလားဗျာ...။
နဂိုက မြှောက်၇င်တက်အောင် ကတယ်ဆိုတာ ဘာ တက်အောင်ကတာလည်းဟင်
ရေးထားတာ အလွယ်တကူ မြင်ယောင်စေတယ်...
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သားသမီးကို လူတောတိုးရဲတဲ့စိတ်
သတိံ္တရှိရှိဖြစ်စေချင်တဲ့ ကိုဖိုးစိန် မိဘတွေရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်လေးက အတုယူစရာပါပဲ..
ခိုးပြီးဖတ်ပါတယ်ဆိုမှ အော်ရီမိလို့ လူမိသွားတယ်။ ဟီးဟီး။
ဖိုးစိန်ကတော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက တကယ် မလွယ်ဘူး..:)
ပထမနှစ်သိမ့်ဆု ဆိုတော့လည်း မဆိုးရှာပါဘူး။ ဖိုးစိန် ကတော်ပါတယ်။ ပုဆိုးကျွတ်၊ ခေါင်းပေါင်းပြုတ်တဲ့ထိ ကဗျာရွတ်နိုင်သေးတာကို..။ :)
ဟား (၄ကြိမ် ပြန်ဆို)
သူ့ အလှည့်ကျမှ ပေါက်ပေါက်ရှာရှာတွေပဲ ကြားရတယ်...
လူကြီးတွေကလဲ ကလေးကို ဘာကြောင့် ညာရတာတုန်း.. အဲဒါကြောင့် လူကြီးတွေမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ...
အထွေထွေ ဘလော့ဂါ ပထမ နှစ်သိမ့်ဆု
ယူရန် ဆင်မြင့်ပေါ်သို့ တက်ရောက်ပါရန်
ဖျောင်း ဖျောင်း ဖျောင်း (ခုံ ရိုက်ချိုးသံ မဟုတ်ပါ။)
ဟီး ဟီး ဟီး ဟီး ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား တေးထွက်တော့မှာပဲ ဟားဟားဟား ကိုဖိုးစိန် တယောက်ကတော့လေ ဂယ်ပဲ ခေါင်းပေါင်းကုန်းကောက်တုန်းက နောက်ကမြင်လိုက်ရတယ် ဟားဟားဟား
ဟဲဟဲ နှစ်သိမ့်ဆုလည်း ဆုထဲမှာ အကျုံးဝင်ပါတယ် အစ်ကိုရာ... ဒါပေမယ့် တကယ်ကိုပဲ (ရယ်ရပါတယ်) ဟားဟားဟားဟား
ခုမှ ပထမဆုံးလာလည်ဖူးတာပါ... သူများတွေ မန့်သလို ဘယ်လိုလေးမျက်စောင်းထိုးလဲဆိုတာတော့ စိတ်ဝင်စားသွားပါတယ်... :D
အမလဲ မောင်လေး ဖိုးစိန် ပုံကို မြင်ယောင်ပီး ရီမိတယ်၊ ကိုယ်ဆိုလဲ မိဘတွေ ပြောထားသလို အဲ့ဆုကို လိုချင်မိတယ်၊ ငိုမိမှာ အမှန်ပဲ၊
တို့က နံပါတ်မှာ ၄၀. :D
ဟတ်ဟတ် ဖိုးစိန်လေးကတော့ မပြောတော့ပါဘူး. ;D
ဟီးဟီးဟီး.. ရယ်ရတာ အူကိုတက်နေတာပဲ.. ကိုဖိုးစိန်.. ဘာလို့ အဲလောက်တောင် ပေါတာလဲဟင်.. ဟီးဟီးဟီး. ခွိခွိခွိ.. .
ဘာမှမပြောတော့ဘူးဗျာ အပေါ်မှာ အပီရေးလိုက်တော့ လက်ညောင်းသွားပြီဗျ ဟီး